What is Linux ?- စာမျက်နှာ3— MYSTERY ZILLION
wibi ကတော်တော် ကောင်းပါတယ် ။ window နဲ့ ubuntu လွယ်လွယ် နဲ့ တွဲသုံးလို ရတာကို ။ တော်တော် လဲ မို်က်တယ် ။အစပိုင်းကတော့အားလုံး0k ပဲ ။ ဒါပေမဲ့ အနော် computer မှာ wibi နဲ့ ubuntu ကိုတင် ပြီး ubuntu ထဲက sound setting ကိုကလိလိုက် တာ window က sound driver အလုပ်မလုပ်တော့ဘူ:2:။အနော် ကလိချက် တွေလဲလွန်တွားတာပါ ပါတယ်:P။ ဒါကြောင် dual boot နဲ့ စခန်းတွားနေပါတယ် ။ dual boot နဲ့ကတော့ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ် :67:။window တွေစျေးတတ်လာ လို့ မသုံးနိုင်တော့ ရင် linux ကမရှိ မဖြစ်လိုအပ်လာမှာ ပါ ။
Wish I could post here but too lazy to type.
Saturn, is it ok if I post long messages in English?
Kham wrote: »
ကိုစေတန်အစားကျွန်တော်ပဲဖြေပေးလိုက်ပါတယ် ရပါတယ် ဘယ်လိုပဲ ရိုက်ရိုက် ပါ
mz မှာ မြန်မာလိုပဲ ရိုက်ရိုက်၊ english လိုပဲရိုက်ရိုက်ရပါတယ်။ ဘားဂလိလိုတော့ မရိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။:D
Lol. I am not used to Burglish and it literally sux.
What font are you guys using? Zawgyi? I am not using any Unicode keyboard driver right now so I cannot type in Myanmar
ဇော်ဂျီပို့ပေးရမလား။ မေးလေးတော့ ပေးနော်။:)
Thanks but nope, I have personal allergic with MM Unicode systems. Better write in English. I haven't been to MZ for quite awhile. I am just glad to see MZ is gradually growing.
MZ ညီအကို၊မောင်နှများခင်ဗျာ... ဟီးးးးးးး တမျိုးလုံးကိုသိမ်းကြုံးခေါ်လိုက်တာ... ယူပါ။ကယ်ပါအုန်း......အနော် RedHat9ကို minimun install လုပ်ပြီးစမ်းတင်တာတော်တော်အစင်ပြေခဲ့ ပါတယ်... အခုလက်ရှိ redhat ကို text mode အနေနဲ ့သုံးနေပါတယ်။ အခုလေ... text mode ကနေ GUI mode ကိုပြောင်းသုံးချင်တာအစင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဘာတွေလိုသေးလဲဟင်.... ပြောပြကြပါအုန်းဗျာ.... လည်ထွက်နေလို ့ပါ။
ကိုspacboy ကတော့ Red Hat ကိုတော်တော်လေးစိတ်၀င်စားတယ်ထင်ပါ့။ Fedora ကိုစမ်းသုံးပါအကြံပေးလဲ စိတ်မ၀င်စားဘူးနော်။ ကျနော် Red Hat ကိုတော့တစ်ခါမှ install မလုပ်ဖူးပါဘူး။ မသေချာဘူးနော် စမ်းကြည့်ပေါ့
အဲဒါလေးကို run ကြည့်ပါလား။
နောက်ပြီး အောက်မှာ mode ပြောင်းတဲ့ keystrokes တွေပါ။
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Console [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] Keystrokes [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Contents[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
1 [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][Ctrl]-[Alt]-[F1] [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] installation dialog[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
2 [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][Ctrl]-[Alt]-[F2] [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] shell prompt[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
3 [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][Ctrl]-[Alt]-[F3] [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]install log (messages from installation program)
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][Ctrl]-[Alt]-[F4] [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] system-related messages[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
5 [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][Ctrl]-[Alt]-[F5] [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] other messages[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
7 [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][Ctrl]-[Alt]-[F7] [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] X graphical display [/FONT]
ဒီအောက်က blog လေးကတော့ Debian, Ubuntu သုံးနေကြတဲ့ ညီအစ်ကို ညီမငယ်များအတွက်
အသုံး၀ယ်မယ့် blog လေးပါ။ bookmark လေးလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ကိုbox02 ကတော့ ကျွန်တော်ရဲ ့မေခလာနတ်သမီးပါပဲဗျာ... အဟီးးး :D:D မေခလာနတ်သမီးနဲ ့နှိုင်းလို ့ချိတ်ချိုးပါဘူးနော်... ငရဲလဲကြီးလောက်ပါ၀ူးနော်...:P:P:P အခုလို အချိန်ပေးပြီးပြန်ဖြေပေးတဲ ့ကိုbox02ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ... ခင်လဲခင်ချင်ပါတယ်... ကျွန်တော့်မေးက [email protected] ပါ...:77::77::77: Fedora ကိုမသုံးချင်လို ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ ့Fedora 10 ခွေကမကောင်းလို ့ပါ။ အဲဒါနဲ ့ရှိတဲ ့redhat နဲ ့စမ်းနေတာပါ။:):):)
linux ကို ဘယ် virus မ မကိုက်နိုင်ဘူးလို့ ကြားဘူပါတယ်:39:။ virus တော်တော် များများ မကိုက် နိုင်ဘူးဆိုတာ လဲသိပါတယ်။ 100% တော့ ဟုတ်ဘူထင်ပါတယ်။ ရှိခဲ့ ရင် နဲနဲ ပြောပြပေးပါ ။:77:
ဒီကီးတွေက ဘယ်အချိန်မှာနှိပ်သုံးရမှာလဲ..နဲနဲ ပိုပြီးရှင်းပြပေးပါလား... :77::77::77:
ဒီကီးတွေက ဘယ်အချိန်မှာနှိပ်သုံးရမှာလဲ..နဲနဲ ပိုပြီးရှင်းပြပေးပါလား...
အဲဒီကီးတွေက mode ပြောင်းတဲ့ကီးတွေပါ။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်မရွေးနှိပ်လို့ရပါတယ်။
ဥပမာ ကျနော်က X graphical display (ပုံမှန် Graphical Desktop) ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုပါစို့ .. အဲကျနော်က shell prompt (shell prompt with text mode, not on Desktop Terminal) ကိုပြောင်းချင်ရင် [ctrl]-[alt]-[F2] ကီးတွေကိုတွဲနှိပ်ပေးလိုက်ရင် shell prompt (text mode) ကိုရောက်ပါတယ်။ အဲဒီ text mode ကနေပြီး Graphical Desktop ကိုပြန်ရောက်ချင်ရင် [ctrl]-[alt]-[F7] ကီးတွဲနှိပ်ပေးလိုက်ရင် နဂိုပုံမှန် Desktop ပေါ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။
အဲဒါတွေက mode ပြောင်းတဲ့ကီးတွေပါ။
ကျနော်ကတော့ ခင်ဗျားကို Red Hat အစား Fedora ကို try စေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Red Hat က out-of-date ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ပြသာနာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်လို့ google လိုက်ပြီဆိုရင် Red Hat ထက်ကို Fedora ရဲ့ အကြောင်းကို ပိုပြီးတွေ့ရပြီး up-to-date လဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါထက်ကို ubuntu documentations တွေက ပိုလို့တောင်စုံပါသေးတယ်။ offical wiki, unofficial wiki, forums, blogs အစရှိတဲ့ guides, discussion တွေက အများအပြား စုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Documents တွေစုံစုံလင်လင်ရှိပြီး up-to-date ဖြစ်နေတဲ့ Linux Distro ကို try စေချင်ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲကြီး ရှာကြံလုပ်ရပြီး အကျိုးရှိရှိမသုံးရဘူး မလေ့လာရဘူးဆိုရင် အလားပဲနော်။ ပင်ပန်းတာ ခေါင်းစားတာပဲ အဖက်တင်တယ် အချိန်သာကုန်သွားတယ် ပညာလဲမရ ပိုက်ဆံလဲကုန်နဲ့ ဘာမှအကျိုးမရှိတာတွေဖြစ်ကုန်ရော။ ကျနော်ပြောတာ ဟုတ်ရဲ့လား။
ကိုguengey ရေ .. လေ့လာဖို့လင့်လေးပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ anti-virus applications တွေကိုလဲ lists လုပ်ပေးထားတယ်။
ဒီအောက်က pictures links တွေကတော့ အရင်တုန်းက Linux Desktop ရဲ့ screenshots လေးတွေပါ။
နောက်ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ်ဆိုရင် အောက်က link လေးမှာကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
ကဲပါဆရာတို့ ... Linux အကြောင်း မဟုတ်တော့ပဲ ကျွန်တော့်အကြောင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ် ... မတိန်းမစောင်း ဗိန်းမောင်းနဲ့ Linux အကြောင်း ပြန်ဆက်စေဗျား ....
May I learn about ubantu ???
Or some kind of linux??
Now may i studing:106: start for about of linux... Are yours Ready:106::106:
theKing wrote: »
ကိုtheking .. ကျနော်တို့ ubuntu အကြောင်းကို ဒီဖိုရမ်ထဲမှာပဲ ပြောထားတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ လိုက်ဖက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ubuntu installation guide ပါတဲ့ links တွေလဲ တင်ထားပေးပါတယ်။
ubuntu ကိုလေ့လာချင်ရင်တော့ ubuntu cd ကိုအမြန်ဆုံးပြေး၀ယ်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် internet မှာ download လုပ်ဖို့အဆင်ပြေရင် ubuntu iso ကို download လုပ်ပြီး cd ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် စက်ထဲကို install လုပ်ထည့်လိုက်ရင် ubuntu ကိုစပြီးလေ့လာဖို့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းလေးတစ်လှမ်း လှမ်းနိုင်လိုက်ပြီလို့ ခံစားလိုက်ပါတော့။
နောက်ပြီး GIYF လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း "Google Is Your Friend" ပါ။ Google မှာ ubuntu နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentations တွေက ဖက်လို့မကုန်နိုင်အောင် ရှာတွေ့နိုင်မှာပါ။
အဲဒီမှာ ရှာတွေ့ပြီး နားမလည်ဘူးဖြစ်နေရင် မေးပါခင်ဗျား။ အတက်နိုင်ဆုံး နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးမယ့် အစ်ကိုအစ်မတွေက စေတနာအပြည့်စောင့်နေကြပါတယ်။ :6:
အခြား Linux Distro အကြောင်းတွေကိုလဲ ဒီဖိုရမ်မှာ ပြောထားကြပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။
dig (domain information groper) isaflexible tool for interrogating DNS name
servers. It performs DNS lookups and displays the answers that are returned from
the name server(s) that were queried. Most DNS administrators use dig to
troubleshoot DNS problems because of its flexibility, ease of use and clarity of
output. Other lookup tools tend to have less functionality than dig.
bt~# dig google.com
; <<>> DiG 9.4.1-P1 <<>> google.com
google.com. 345549 IN NS ns1.google.com.
google.com. 345549 IN NS ns2.google.com.
google.com. 345549 IN NS ns3.google.com.
google.com. 345549 IN NS ns4.google.com.
ns1.google.com. 345549 IN A 216.239.32.10
ns2.google.com. 345549 IN A 216.239.34.10
ns3.google.com. 345549 IN A 216.239.36.10
ns4.google.com. 345549 IN A 216.239.38.10
;; SERVER: 24.158.63.8#53(24.158.63.8)
;; WHEN: Sun Jan609:21:53 2008
Examples of issueingasimple query:
nslookup name server
nslookup IP_address server
bt~# nslookup 72.14.207.99
207.14.72.in-addr.arpa nameserver = ns3.google.com.
207.14.72.in-addr.arpa nameserver = ns4.google.com.
207.14.72.in-addr.arpa nameserver = ns2.google.com.
host isasimple utility for performing DNS lookups. It is normally used to convert names to IP addresses and vice versa. When
no arguments or options are given, host printsashort summary of its command line arguments and options.
bt~# host google.com
This version of the whois client tries to guess the right server to ask for the specified object. If no guess can be made it
will connect to whois.networksolutions.com for NIC handles or whois.arin.net for IPv4 addresses and network names.
bt~# whois syr.edu
Domain record last updated: 11-Jul-2007
Domain expires: 31-Jul-2008
* we all know this one
Nmap (Network Mapper) is an open source tool for network exploration and security auditing.
bt~# nmap -P0 -sS syr.edu
Starting Nmap 4.50 ( http://insecure.org ) at 2008-01-06 09:45 EST
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 215.657 seconds
ping uses the ICMP protocol's mandatory ECHO_REQUEST datagram to elicit an ICMP ECHO_RESPONSE fromahost or gateway.
ECHO_REQUEST datagrams (``pings'') have an IP and ICMP header, followed byastruct timeval and then an arbitrary number of
``pad'' bytes used to fill out the packet.
bt~# ping -c2128.230.18.35
PING 128.230.18.35 (128.230.18.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 128.230.18.35: icmp_seq=1 ttl=240 time=70.6 ms
64 bytes from 128.230.18.35: icmp_seq=2 ttl=240 time=69.6 ms
--- 128.230.18.35 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 69.685/70.155/70.625/0.470 ms
7) traceroute (mtr)
As mtr starts, it investigates the network connection between the host mtr runs on and HOSTNAME. by sending packets with purГў&#128;Вђ
posly low TTLs. It continues to send packets with low TTL, noting the response time of the intervening routers. This allows mtr
to print the response percentage and response times of the internet route to HOSTNAME. A sudden increase in packetloss or
response time is often an indication ofabad (or simply overloaded) link.
bt~# traceroute 128.230.18.35
traceroute to 128.230.18.35 (128.230.18.35), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.934 ms 1.855 ms 2.097 ms
2 10.114.0.1 (10.114.0.1) 10.197 ms 12.492 ms 15.662 ms
3 172.22.5.13 (172.22.5.13) 16.707 ms 16.737 ms 8.981 ms
4 172.22.5.69 (172.22.5.69) 8.570 ms 12.523 ms 12.354 ms
5 172.22.32.114 (172.22.32.114) 14.607 ms 21.783 ms 11.076 ms
6 172.22.32.106 (172.22.32.106) 14.286 ms 14.387 ms 14.173 ms
7 12.86.87.29 (12.86.87.29) 18.481 ms 21.724 ms 14.085 ms
8 tbr2.attga.ip.att.net (12.122.96.74) 36.853 ms 40.701 ms 41.588 ms
9 tbr1.dlstx.ip.att.net (12.122.2.89) 46.345 ms 44.641 ms 47.791 ms
10 ggr3.dlstx.ip.att.net (12.123.16.193) 45.555 ms 44.932 ms 44.856 ms
11 br2-a3120s2.attga.ip.att.net (192.205.33.206) 46.336 ms 45.324 ms 35.904 ms
12 66.192.240.226 (66.192.240.226) 64.172 ms 63.947 ms 109.761 ms
13 64-132-176-170.static.twtelecom.net (64.132.176.170) 74.404 ms 77.708 ms 78.053 ms
14 128.230.61.1 (128.230.61.1) 78.784 ms 76.568 ms 78.336 ms
15 c6509r-srv.syr.edu (128.230.61.58) 77.995 ms 78.127 ms 78.214 ms
16 cwis01.syr.edu (128.230.18.35) 78.310 ms 70.660 ms 74.593 ms
The telnet command is used to communicate with another host using the TELNET protocol. If telnet is invoked without the host
argument, it enters command mode, indicated by its prompt (telnet>). In this mode, it accepts and executes the commands listed
below. If it is invoked with arguments, it performs an open command with those arguments.
bt~# telnet os.edu 21
Connected to os.edu.
220 FTP server...
ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။ လင်းနစ် သမားတွေအတွက် ရှားပါးပစ္စည်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ။
ကျွန်တော့် BackTrack3မှာတော့ ok တယ်။
အရင်ဆုံး readme ဖတ်ပြီး သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း make install လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် modprobe tun အရင်လုပ်ပေးရတယ်။
အဲဒါပြီးမှ run ပေတော့ အေးဆေးပါ...။ :):):)
ကို box နဲ့ ပြေားဆို ဆွေနွေးပြီး Ubuntu ကိုစသုံးဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ သဘောလည်းကြပါတယ်။ Linux မှာ တခြား os တွေအများကြီးရှိတာသိပါတယ် ။red hat တို့ဘာတို့ လို။ ဒါကြောင် os အားလုံးရဲ့ feature တွေတူလား ။ window လိုမျို os တွေကို အဆင်မြင့် မြင့် ပြီး ထုပ်တာလား ။ eg .Me ,xp, vista etc တဆင့်တဆင့် မြင့် လာတယ် sp1,sp2 တွေလဲပါလာပါတယ် ။ Linux ကောအဲလိုပဲ Update ဖြစ်တဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီ os name ပြောင်တာလား။ linux Os တွေက တခုနဲ့ တခု သုံးတဲ့ command တွေကောတူလား ။ ဘာကို မူတည်ပြီး 0s တွေ ကွဲးသွားတာလည်း။
Distro တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတူပါဘူး... Linux က Opensource ဖြစ်တဲ့အတွက် supporting တွေများသလို Distro တွေ GUI တွေကလည်း များပါတယ်။ အများအသုံးပြုတာကတော့ Gnome, KDE, Xcf တို့ပါ။ အဲလိုမျိုးမှာပဲ Gnome အတွက် File Manger တွေကတော့ http://www.linuxquestions.org/questions/2004-linuxquestions.org-members-choice-awards-62/file-manager-of-the-year-272138/ အဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးများစွာထဲမှ နှစ်သက်ရာအပိုင်းတွေကို စုပြီးတော့ Linux OS Distro တွေလုပ်ကြတာပါ။ တကယ်တန်းတော့ သိပ်မကွာခြားပါဘူး။ အဓိကတော့ kernal version ကိုသာ အမြဲ update ဟုတ်မဟုတ်ပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆို GNOME verison ကို ကြည့်တာပေါ့။ နာမည်တွေက Distro နာမည်တွေပါ။
Linux ကတော့ ဘူဖေးစားသလို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲ ရွေးထည့်ပြီး ကိုယ့် OS ကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်လေ။ Windows ကတော့ အရံသင့် ဟင်းပွဲလို အကုန်လုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတာပဲ။ ဘူဖေးစားမယ်ဆိုရင် မျက်စိညောင်းတယ် ခေါင်းရှုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေပဲ စားရတယ်လေ။ အရံသင့်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုက်တာလည်း ပါမယ် မကြိုက်တာလည်း ပါမယ်ပေါ့။
ကိုစေတန်ကြီး ပြောသလို ကျနော်တို့ ဘူးဖေးထပ်စားကြရအောင် ..
M$ Windows ရဲ့ History မှာ အပေါ်ကပြောသလို Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista စသည်ဖြင့်ပေါ့ သူတို့ရဲ့ features တွေ Graphical User Interface တွေစတာတွေကို တစ်ခုကနေတစ်ခု base ခံပြီးတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်ကြသလိုပဲ Linux Distros တွေမှာလဲ အဲလိုလေးတွေရှိပါတယ်၊ တနည်းပြောရရင် Software Life Cycles and History ပေါ့ဗျား။ ကျနော်တို့ Linux မှာ ဥပမာ ubuntu ကိုပြောမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ Life Cyle က ၆လ တိုင်းမှာ version အသစ်ထုတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် version တစ်ခုကို ၁၈လ support လုပ်ပေးပါတယ်။ new updates, security updates စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ubuntu ရဲ့ versions တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
1 Ubuntu 4.10 (Warty Warthog)
2 Ubuntu 5.04 (Hoary Hedgehog)
3 Ubuntu 5.10 (Breezy Badger)
4 Ubuntu 6.06 (Dapper Drake)
5 Ubuntu 6.10 (Edgy Eft)
7 Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)
8 Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)
9 Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex)
10 Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
ubuntu 4.10 ကို October 20, 2004 မှာ စထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာကြည့်ရင် versions ရော code names ပါတွေ့မယ်နော်။ အရမ်း Smart ကျတယ်နော်။
အဲ . Debian Linux ကို ကြည့်ပြန်ရင် သူတို့ code names တွေပေးထားတာ အရမ်းကို စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့
အဲဒီလိုလေးတွေ အဲဒီ debian linux ရဲ့ code name တွေက Movie ထဲကနေချည်း ယူထားတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် Animated Movies ထဲကယူထားတာဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲ။
ဒါပေမယ့် Debian Linux ရဲ့ Life Cycle က တခြား Linux Distro များလို ၆လ တစ်ခါမဟုတ်ပဲ .. ဘယ်လောက်ထိ stable ဖြစ်လဲ ဘယ်လောက် security ရှိလဲ နောက်ပြီး package maintainers ရဲ့ policies ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နှစ်ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်၊ တစ်နှစ်ခွဲကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် it depends ပေါ့။
နောက်တစ်ခုက Linux Distro တွေမှာ commands တွေလဲ ကွဲပြားမှု အနည်းနဲ့အများရှိပါတယ်။ ဥပမာ Shell ကိုကြည့်ရင် တစ်ချို့က sh , တစ်ချို့က bash , တချို့က ksh စသည်ဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။ commands တွေကလဲ သူတို့ရဲ့ favour အတိုင်းလိုတိုး ပိုလျော့လေးတွေ ထူးခြားတဲ့ features တွေရှိမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးတဲ့ Linux Distro ရဲ့ ဒါမှမဟုတ် Linux Version ရဲ့ အသုံးပြု shell နှင့် applications များအလိုက် commands အသုံးပြုပုံလဲ ကွဲလွဲတက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင်း အဲဒါကိုကြိုပြီးဆင်ခြင်နိုင်အောင် Release Note တွေဖတ်သင့်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ Documentations တွေကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက တကယ်တမ်းလည်း အသုံး၀င်လို့ essential အနေနဲ့ ရေးပေးထားကြတာပါ။
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကို မဖတ်ပဲနေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံး ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Linux Distro ရဲ့ Release Note နဲ့ Documentations တွေကို အချိန်ရရင်ရသလိုဖတ်ပေးရင် သိပ်အကျိုးရှိတာပဲ။
အပိုဆောင်းလေးတစ်ခုထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် Debian Distro ရဲ့ နောက်ထွက်မယ့် Release တွေမှာ Shell အနေနဲ့ Bash အစား Dash (Debian Almquist Shell) ကိုပြောင်းပြီးထည့်မှမို့ အခြေခံ shell commands လေးတွေကတော့ တူပေမယ့် တချို့ဟာလေးတွေမှာ ကွဲပြားသွားမှာပါ။ Debian သမားများအတွက်ပါ။ ကဲ ကို guengey ရေး စိတ်ကျေနပ်မှုရပြီလား ခင်ဗျား။ မရှင်းတာရှိရင်လဲ ထပ်ပြီးမေးကြပါ။ ကျနော်ကတော့ အမေးနဲ့အဖြေနဲ့ ကိုက်အောင်ဖြေချင်ပေ့မယ့် နှစ်ဦးကြားနားလည်မှုလွဲရင်လဲ စိတ်ကသိကအောက်မဖြစ်ပဲ ထပ်ပြီးမေးမြန်းပါခင်ဗျား။
အစ်ကိုရေ ကျနော်လည်း readme ဖတ်ပြီးလုပ်တာပဲအဆင်မပြေဘူးဗျာ။လူကိုကတုံးတာလည်းပါ တယ်။ အသေးစိတ်ရေးပေးပါလား ကိုTweetyရေ။ ကျနော်လည်း backtrack3မှာစမ်းတာပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဲဒါပြီးမှ run ပေတော့ အေးဆေးပါ...။
ပစ္စည်းကောင်းလေး ဆိုပြီး ဘာပစ္စည်းမှန်းလည်း မပြောဘူး။ ဒေါင်းလော့ ချရမလို။ ဒီတိုင်းပဲ ထားရမလိုနဲ့
joemin wrote: »
၂။ အဲဒီအခါ openvpn-2.0.9-source ဆိုတဲ့ ဖိုဒါလေးထွက်လာလိမ့်မယ်။
၃။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုရှည်တဲ့နာမည်မျိုးဆို အတိုလေးပြောင်းပစ်တာပဲ။
၄။ ပြီးရင် ./configure
၆။ make install
၇။ ပြီးရင် config ဖိုင်တွေ၊ certificate ဖိုင် နဲ့ key ဖိုင်တွေကို ခင်ဗျားရဲ့စက်ထဲက /etc/openvpn/ အောက်ကို ကူးလိုက်ပါ
၈။ backtrack3မှာတော့ modprobe tun ဆိုပြီး run ပေးရတယ်။
၉။ ခုဆိုရင် shell prompt ကနေ openvpn --config /etc/openvpn/alwaysvpn-tcp-Compatible.conf လို့ရိုက်လိုက်ရင် အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်(ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ ဖိုင်ကို နာမည်အတိုလေးပြောင်းလိုက်တာပါပဲ)။
၁၀။ Initialization Sequence Completed လို့ပေါ်လာရင် အောင်မြင်စွာ ဆက်သွယ်မိပါပြီ။
ဘရောက်ဆာမှာ ဘာ setting မှ change စရာမလိုပဲ၊ openvpn ဆာဗာနဲ့ ဆက်မိသွားပါပြီ။
Linux နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသိသေးသူ မတတ်သေးသူတွေ မကြာဘူးသေးသူတွေ နားလည်အောင် ရှင်းပြရအောင် ဒီ thread ကို ဖွင့်လိုက်တာပါ
Ubuntu ကို အခုမှစပြီးလေ့လာတာပါ။ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို Install မလုပ်တတ်လို့ပါ။ Basic လေးတွေကိုလည်းလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်:((
zenithsbo wrote: »
ကျနော်က မန်ဘာအသစ်ပါ.... fedora7ကို သုံးပါတယ်.... သိချင်တာက အဲဒီထဲမှာ မြန်မာဖွန့်တွေကို install လို့ ရပါသလား...ရရင် နည်းလမ်းလေးညွှန်ပြပေးကြပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
kotezar wrote: »
Fedora အတွက် rpm package ကို ကိုစေတန်လုပ်ထားပေးတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ သွားကြည့်လိုက်နော်
နောက်ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ Linux Resource Center ကိုလာလည်နိုင်ပါတယ်။
Linux အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Linux ဟာ Unix-Like ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့သမိုင်းကြောင်းထဲမှာ Unix Operation Systems အကြောင်းပါ ပြောမှပြည့်စုံသင့်တော်မယ်။
UNIX ကို AT&T ကနေပြီး 1969 ကနေစတင်ခဲ့တယ်။ ကနဦးမှာ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ရဲ့ Bell Labs ကနေ 1957 ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
Multics (Multiplexed Information and Computing Services) လို့ Code Name ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ UNICS (UNiplexed Information and Computing Service) လို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုရာမှ တဆင့် စာလုံးပေါင်း UNIX လို့ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။
သူရဲ့ Trade Mark ဟာ စာလုံးအကြီးတွေနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ UNIX ပဲဖြစ်ပြီး အချို့က UNIX ဆိုပြီး Small Caps နဲ့လဲရေးလေ့ရှိတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် Release လုပ်တာကတော့ 11/03/1971 မှပါ။ UNIX ရဲ့ Design ကို Portable , Multitasking, Multi User, Time Show ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါဝင်အောင် အခြေခံတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။
အရင်တုန်းက Unix က Computer လောကမှာ စိုးမိုးနေရာယူထားတဲ့အချိန် Unix ကလုံးဝနာမည်ကြီး။ အဲဒီအချိန်မှာ Unix မှ Unix ဖြစ်နေတော့ Microsoft ကနေ Unix ကိုစီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနဲ့ (1970) ခုနှစ် လောက်မှာ တရားစွဲတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ Unix ရှုံးသွားခဲ့တယ်။ Unix က အမှုရှုံးတော့ Unix Source တွေနဲ့ တော်တော်များများ ယူသုံးကြတယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာ XP တို့ Vista တို့ကို သုံးသလိုမျိုးပေါ့။ လူနည်းစုကပဲ တရားဝင်လိုင်စင် ဝယ်သုံးကြတယ်။ အများစုကတော့ Copy တွေပဲပေါ့။ အလကားရတော့ ယူတာပေါ့။ ကျောင်းတွေ ရုံးတွေ အလုပ်ရုံတွေမှာ လိုင်စင်နဲ့ဆို တော်တော် ကုန်ကျမှာလေ။
နောက် ၁၀ နှစ်လောက်ကြာ (1980)ခုနှစ် လောက်မှာ Unix က အဲဒီအမှုကိုပြန်ပြီး အယူခံဝင်တယ်။ တရားရုံးကလဲ အယူခံကို လက်ခံလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ စတွေ့တာပဲ။ ဘယ်ပြေးမလဲ အလကားရလို့ ယူသုံးထားတဲ့သူတွေ။ လိုင်စင်ကြေးပေးမလား မသုံးပဲနေမလား။ ခိုးသုံးလို့ကတော့ ဖမ်းမိရင် လျော်ကြေးက နည်းမှာမဟုတ်ဘူေးလ။ အဲဒီတော့မှ ပေးရတော့တာပဲ။ စက်ရုံတွေ ရုံးတွေကတော့ ပေးနိုင်တာပေါ့ Amount မှ သိပ်မများတာကိုး။ မပေးနိုင်တာတွေက University တွေ ကျောင်းတွေ ဆေးရုံလိုဟာတွေ။ အလုံးရေကမနည်းသလို တစ်ကယ်လဲ အများကြီး ပေးရလောက်အောင် အသုံးဝင်နေတာ မဟုတ်သလို မထားလို့လဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အကျိုးအကြောင်း ပြောပြ ဒီတော့ Unix ကနေပြီး Kernel သာသာလေး Computer ခေါ်လို့ရတယ် ဆိုရုံလေး ပေးထားလိုက်တယ်။ ဘာဆိုဘာမှ သုံးစားမရတဲ့ အခြေအနေပေါ့ဗျာ။ အရင်တုန်းက ဒီကကျောင်းတွေလို စက်ကိုမြင်သာမြင် မကြင်ရဆိုတဲ့ Multimedia Room တွေလိုပေါ့ဗျာ (အရင်ကနော် အခုတော့ ပြောင်းလဲလာပါပြီ) ။ အဲတာကို မကျေနပ်တော့ Andrew S. Tanenbaum ကနေ ကျောင်းတွေ Education အတွက် Minix (Mini Unix) ဆိုတာကို 1987 မှာစတင်ပြီး ပြင်ရေးတယ်။ Minix 1 က Unix7ကိုလိုက်နာတယ်။
Sun တို့ IBM တို့ TOSHIBA တို့ကလဲ Unix ယူသုံးထားတာပဲ။ သူတို့ကမှ သုံးတာဆိုတာထက် ရောင်းစားတာဆိုပိုမှန်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ Hardware တွေမှာ Unix OS ထည့်ပြီးမှ ရောင်းစားနေတာလေ။ အဲဒီတော့မှလဲ စက်ကရောင်းရမှာကိုး။ စက်အခွံကြီးပဲဆို ဘယ်သူက ဝယ်မတုန်း။ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီတော့ Unix ကလည်း ပြီးတာတွေလည်း ရှိပါစေတော့ နောက် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ ကဲ (အဲလိုတော့မပြောသော်လည်း အဲဒီပုံစံပေါ့နော် ) ဒီတော့ စက်တစ်လုံးချင်းအတွက် ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း Hardware သမားတွေသေပြီ။ ဒီတော့မှ Hardware Industry တစ်ခုခြင်းအတွက် Close Source အနေနဲ့ Unix-Like တွေကို နှစ်စဉ်ကြေးပုံစံနဲ့ Limited လေးလုပ်ပြီး လိုင်စင်လေးတွေ ချရောင်းပေးတယ်။
IBM = AIX (Advanced Interactive eXecutive) Unix V 1986 -2007
HP = HP-UX (Hewlett Packard UniX) Unix V 1989- 2008
SIG = IRIX Unix V + BSD 1998-2006
Sun Microsystems = SunOS Unix7+ BSD 1982 -1994
DEC, HP, IBM, Compaq= Tru64 1992 -2006
DEC = Ultrix (BSD Unix) 1977~78 -1995
Microsoft = Xenix (Unix) 1970-1989
နောက် MS နဲ့ IBM ပေါင်းပြီး OS/2 ဆိုပြီး Unix / Xenix ထုတ်ပါသေးတယ်။
1977 ခုနှစ်မှာပဲ Berkeley (University of California) ကနေလဲ UNIX like Systems အဖြစ် BSD (Berkeley Software Distribution)ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ FreeBSD OpenBSD NetBSD DragonflyBSD တွေ ဆက်လက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ 1977 to 1995
1984 ခုနှစ်မှာ Richard Stallman ကနေပြီး GNU Project ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ သူရဲ့ဦးတည်ချက်က Unix မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို ရေးသားပြီး အခမဲ့ပေးနိုင်ဖို့တဲ့။ နောက်တစ်နှစ်မှာ (1985) မှာ FSF လို့ အခုခေါ်ကြတဲ့ Free Software Foundation ကိုတည်ထောင်တယ်။ GNU General Publish License (GNU GPL) ကိုလည်း တလက်စတည်း ဆက်လက်ရေးသားတယ်။ တစ်ကယ်ရေးတော့ Compiler, text Editor တွေ Unix Shell တွေနဲ့ Windowing System တွေကို 1989, 1990 လောက်မှပြီးတယ်။
သူတို့ ဘယ်လောက် copyright ကို စိတ်ကုန်သလဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ license ကို Copy left တဲ့ဗျာ။ သူများတွေက c ကို အပေါ်က ဝိုင်းထားတယ်ဗျာ။ သူက ဆန့်ကျင်ဘက် c ရဲ့ပြောင်းပြန် မြန်မာဂဏန်း ၁ လိုမျိုးလေးကို ပြန်ဝိုင်းပေးထားတယ်။ မှတ်ကရော ကဲ။
နောက် Andrew S. Tanenbaum ရဲ့ ကျောင်းသား Linus Torvalds ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က News Group တစ်ခုမှာ Unix ကဲ့သို့သော OS မျိုး အခမဲ့ မရေးနိုင်ဘူးလား အစကစပြီး ရေးကြရအောင်ဆိုပြီး ကြွေးကြော်ပြီး စတင်ဖိတ်ခေါ်တာ တွေ့ရတယ်။ Linus Torvalds အဲဒီနောက်ကို တစ်ကောက်ကောက် လိုက်ရင်း ပထမဆုံး Linux kernel ကို C Language နဲ့ရေးပြီး 1991 ခုနှစ်မှာ Release လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
တစ်ကယ်တန်းတော့ Linux က kernel တစ်ခုတည်းပါပဲ။ Core Kernel လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။ အဓိကဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် သူတစ်ခုတည်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Operation System တစ်ခုဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ Module Base/Component တွေလိုအပ်ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ GPL လိုင်စင်မှာပါတဲ့ Software တွေက Unix-Like လေ။ Unix ပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ Free Software ။ အခုရေးတဲ့ Linux Kernel ကလဲ Unix-Like ဆိုတော့ Unix လိုပဲ အလုပ်လုပ်တယ်။ နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မှ တိုးတက်လာတာ အံ့မခန်းပဲ။ Unix က 1960 မတိုင်မှီက Assembly နဲ့ရေးပြီး 1960 နောက်ပိုင်းတော့ C နဲ့ရေးထားတာ။ Linux ကလဲ C နဲ့ပဲရေးထားတာ။
Unix Linux (Portable OS Interface for Unix)
POSIX = HP-UX, AIX, Solaris, BSD, IRIX, вЂ¦ = = Microsoft
DOD 6.22 16bit Linux 32bit Windows 95 32bit
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် Linux the NOT Unix!
နောက်ပိုင်း GPL license နဲ့ Software တွေများလာသလို GPL License ကလဲ Version3အထိရောက်လာတယ်။ အဲဒီမှာ Linus Torvalds က GPL v3 မှာပါတဲ့ အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ မကြိုက်တဲ့အတွက် GPL v3 ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလာပြန်လို့ Richard Stallman က ဆီလီကွန်တောင်ကြားက Linus ရဲ့အိမ်မှာ သုံးရက်လောက် အခြေအတင် တော်တော်ကြီး ဆွေးနွေးခဲ့ရပါသေးတယ်။ နောက်မှ Linus Torvalds ကလက်ခံသွားတာ။
1998 ခုနှစ်မှာ OSS (Open Source Software) တွေ OSD (Open Source Definition) တွေ အတွက်ဆိုပြီး OSI (Open Source Intiactive) ဆိုတဲ့ corporation တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ Eric S. Raymond ကစပြီး 1997 မှာစတည်ထောင်တာပါ။ သူကတော့ Source တွေပါမျှဝေပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Open Source ဆိုတဲ့အမည်ကို စတင်သုံးစွဲခဲ့တာကတော့ Netscape (Mozilla) ပါပဲ။ OSI ရဲ့ Logo ကတော့ မြန်မာလို ဂ ငယ်လေးဗျ။ CopyRight - EULA တွေ တော်တော်မုန်းကြပုံပဲ.။
OSS နဲ့ FSF ကတူသလိုနဲ့မူကွဲတယ်။ Richard Stallman က GPL ကို OSS လို့တွဲသုံးရင်မကြိုက်ဘူး။ FSF က Software တွေ Free ပေးသုံးဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ OSS က Source တွေ မျှဝေပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ နောက်ပိုင်း Software တွေတော်တော်များများက OSI က OSS အတွက် Certificate ပေးပြီး အသိအမှတ်ပြုတယ်။ GPL License ရဲ့စည်းကမ်းတွေအောက်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Software တွေက နှစ်ခုလုံးကို လိုက်နာတော့ OSS, GPL နှစ်ခုလုံးတူတူပဲလို့ အမှတ်မှားနေကြပြီ။
OSS တွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ sourceforge.net လိုဆိုက်တွေ ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ပိုင် Source တွေ Free တင်ထားနိုင်သလို support services ရောင်းခိုင်းလို့လဲရပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ သောင်းချီနေတဲ့ Source တွေကို ယူပြီး သုံးစွဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Source တွေ အခမဲ့ပေးထားပေမယ့် support services ကို ပိုက်ဆံပေးမှ လုပ်ပေးတာတွေလဲရှိပါတယ်။
(CVS) Concurrent Versions System နဲ့ (svn) Subversion တွေနဲ့ ပြသထားပါတယ်။ wiki ကိုအသုံးပြုပြီး Source History တွေ Manual တွေ Bug Report တွေရေးနိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း နာမည်ကြီးလာတာကတော့ http://code.google.com/hosting/ ပါ။ အခမဲ့ Source တွေ သွားရောက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်။
source : http://friend4.wordpress.com/2009/01/06/linux/
Linux အကြောင်းဆက်ကြ ပါဦး။ အသစ်ထွက်တဲ့ package တွေ။ သုံးလို့ ကောင်းတာလေးတွေ share ကြရအောင်။
အချိန်ရရင် ဆက်ရေးပါအုံးဗျာ ...
စာအုပ်တစ်အုပ်အနေနဲ့ကို သိမ်းထားသင့်တဲ့ topic လေးပဲ ..
အခုထိရေးသားပြီးသမျှ linux ပို့စ်တွေကို pdf လေးလုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဘာညာသရကာပို့စ်တွေတော့ ကျနော်မထည့်ထားပါဘူး ။
P3 လို computer မှာ linux ကို စမ်းလို၇လာသိခြင်လိုပါ။
ကွန်ပျူတာကလဲကျွန်တော်မှာ က p3 ဖြစ်နေလိုပါ။
ဒီအောက်ကလင့်မှာ နည်းနည်းလေး လိုက်ဖတ်လိုက်ဗျာ ..
P3 ကတော့ ကောင်းကောင်းတင်လို့ရပါတယ်ဗျာ ..
အင်း ကွန်ပျူတာသက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေကတော့ တကယ့်ကို သိသင့်ပါတယ်။ ပညာရေးစနစ်က ကျောင်းသာပြီးသွားတယ် နကန်းတလုံးမှ မသိသွားလိုက်ရသလိုဖြစ်နေကြရတာ သနားစရာနော်။
Ko box02 ရေ ကျနော်လည်း ကျောင်းသာ ပြီးသွားတယ်၊ မသိသွားလိုက်ရသလိုဖြစ်နေကြရတာ မပြောနဲ့၊ကျနော်က ဘာမှမသိဘူး။သနားစရာထက် တိုင်းပြည်နစ်နာတယ်။we need change.
Linux ထဲကို ခြေစုံပစ် ဝင်တော့ မလို့ပါ။စေတန်ကြီးညွှန်း လိုက်တယ်လို့ပြောရမလားပဲ။ဆက်ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။english လိုလေ့လာရတာ မရှင်းလို့ပါ။
အစ်ကိုတို့လို အတ္တနည်းတဲ့ ပရဟိတသမားများ အတွက် လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။
waidar wrote: »
i am not sure about it but i think root is like system32 and opt is like program file
your username folder is like my document . but command script are stored in bash
/sbin နဲ့ /bin လေ bin ဆိုတာလေ/sbin ထည်းမှာ system binary file တွေပါပြီး /bin ထည်းမှာလည်း system file တချို့ ပါတယ်../etc ထည်းမှာတော့ system configuration file တွေပါတယ်
ဘာအရေးကြီးလည်းဆိုတာတော့ အနော်လည်းသိဘူး/ root ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲ